လေနုအေး: ပြိုင်ဘက် != ရန်သူ
Sis....Thanks for ur thinking and writing...
အရင်က ဘယ်တော့မှ သင်ခန်းစာ မရခဲ့တဲ့ ကိုယ် ဒီပွဲမှာတော့ သင်ခန်းစာရလိုက်တယ်။ အနိုင်ရသွားတဲ့ အိုဘားမားက အရှုံးသမား မက်ကိန်းရဲ့ အရည်အချင်းတွေကို အသိအမှတ်ပြုသလို၊ ရှုံးသွားတဲ့ မက်ကိန်းကလဲ အနိုင်ရသွားတဲ့ အိုဘားမားကို ကောင်းချီးသြဘာပေးပြီး နိုင်ငံအတွက် ပူးပေါင်းလုပ်ဖို့ ပြောသွားတယ်။ သိပ်လှတဲ့ ဆက်ဆံရေးပါ။
မြတ်နိုးတော့ အဲဒီစကားလုံးလှလှတွေကို ကြောက်တယ်။အမရေ..။
ဖုံးပီး အမုန်းတွေ ကို ကြောက်ပါတယ်..အမရာ..။
မှန်တာပေါ့…တန်ခူးရေ။ မက်ကိန်းတို့ အိုဘားမားတို့ကိုိ အတုယူရမှာပေါ့ဗျာ။
ဒီမိုကရေစီ စနစ်မှာ၊ လွတ်လပ်တဲ့ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ လူတွေဟာ သဘောထားကြီးကြတယ်။ ရင့်ကျက်ကြတယ်။ တန်းတူရည်တူ ရှိမှုကို အလေးထားတယ်။
မလွတ်လပ်တဲ့ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ကွဲလွဲမှု၊ ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုကို ကောင်းမွန်တဲ့ လက္ခဏာတရပ်လို့ အသိအမှတ်မပြုတတ်ကြဘူး။ ငြိမ်းချမ်းစွာ ကွဲလွဲခြင်းကို ရန်ဖြစ်နေတယ်လို့ ထင်ကြဟန်ရှိတယ်။ Dialogue ဆိုတာကို အမှန်တကယ် မယုံကြည်တတ်ကြဘူး။
နောက်ပြီး အာရှနိုင်ငံတချို့မှာ အာဏာရပါတီကနေ အခြား နိုင်ငံရေးပါတီက နိုင်ငံရေးသမားတွေကို မတရားတဲ့ ဥပဒေတွေနဲ့ နှိပ်ကွပ်လေ့ရှိတယ်။ ဥပမာ…မြန်မာ၊ မလေးရှား၊ စင်္ကာပူ စသဖြင့်….။
မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာပါတီကို မိမိဘာသာ လွတ်လပ်စွာ ထောက်ခံခွင့်ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် မိမိထောက်ခံတဲ့ အစိုးရတရပ်ဟာ တဖက်လူကို တန်းတူရည်တူအခွင့်အရေးပေးသလား၊ မပေးဘူးလားဆိုတာ ဆန်းစစ်ရမယ်။ အဲသလိုမဟုတ်ဘဲ တရားသည်ဖြစ်စေ၊ မတရားသည်ဖြစ်စေ အာဏာရှင်တွေကို မျက်စိမှိတ်ထောက်ခံခဲ့ရင် မိမိကိုယ်တိုင်လည်း ကြံ့ဖွံ့လို အတန်းအစား ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
တရားမျှတမှုရှိသော လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ ရင့်ကျက်သော လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ထူထောင်နိုင်ဘို့ ကြိုးစားကြပါစို့။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့ Yes, we can. ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံနဲ့ဘဲ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ရတဲ့ အရာတခုကို ဖြစ်လာအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်ပါလား။
မြန်မာတွေမှာလည်း အဲသည်လိုဘဲ Yes, we can. ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံနဲ့ဘဲ လွတ်လပ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကို ထူထောင်နိုင်ဘို့ အားလုံး ကြိုးစားသင့်ပါပြီ။
Yes, we can. ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံဟာ ကိုယ်လုပ်နိုင်သမျှကလေးဘဲ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ တာဝန်ရှောင်စိတ်ဓါတ်နဲ့ ဆီနဲ့ရေလို ကွာခြားတာကို သတိထားမိပါတယ်။
လှလိုက်တဲ့ presentation လေး။ လူတွေရဲ.သဘာဝရယ်..ရင့်ကျက်တဲ့သူတွေထားသင့်တဲ့ စိတ်ထားလေးတွေ။ တကယ်တမ်း အပြောလွယ်ပြီး အလုပ်ခက်ရတဲ.အထဲမှာ ငါစွဲမထားဖို့က တော်တော်ကိုခက်တာပါ။ မတူတာတွေ ထားလိုက်ပြီး တူညီတဲ. ဦးတည်ချက်ကောင်းကောင်းလေးကို ရှေ.တန်းတင်ထားလိုက်နိုင်ရင် အနည်းဆုံးကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်လေးတော့ သာယာလာနိုင်မယ် ထင်တာပါပဲ။
လာ ပြီး တော့လဲ ဖတ် ကြည့်မိ ပါ တယ်..ဆိုး လဲ မ ဆိုး ပါ ဘုး..အပျင်း လဲပြေ ပါ တယ်...တစ် ခါ တစ် လေလဲ ခံ စား ရ ပါ တယ်.... ဒါ ပေ မယ့်အမှန် အတိုင်း ပြော ရ ရ င် .... Positive Thinking တွေ အ ၇မ်း များ ကြ ပီး ဘုတ် ကို ကျီး မြှောက် ကျီး ကို ဘုတ် မြှောက် တွေ ဒီ ပတ် ၀န်း ကျင် မှာ အ ရမ်း များ ကြ သလို ဘဲ...နော်...စိတ် မ ဆိုး ပါ နဲ့ ...
အစ်မ ..စာတွေက ဖတ်လို့ ကောင်းလိုက်တာ ကျနော်တော့ ဘလော့နဲ့ ဝေးတဲ့ အခိုက် လွမ်းနေရတော့မှာပဲ မေဂျာစွဲတွေကတော့ပြောမနေနဲ့ တော့ ရှိတာက အတန်းသားလေး ၅၀ ကျော် အားပေးလိုက်ရတာ လည်ချောင်းကွဲမတက်ပဲ ။ မရင့်ကျက်တာသိပေမယ့် ပြင်မရသေးတာခက်တယ် ကျောင်းတုန်းက ဘေးချင်းကပ်ထိုင်တဲ့သူငယ်ချင်း ကိုယ့်ထက် အမှတ်များရင်တောင်မနာလိုတဲ့စိတ်ကပြင်မရဘူး တကယ်တော့ ကိုယ်လည်းအတော်ကြီးမဟုတ် ။
ဖက်ဒါရာ ပရိသတ်ချင်းတော့ တူနေပြီးး အဖော်ရသွားပြီးဗျ ကျနော်လည်းတစ်နစ်ပွဲတွေဆို တစ်ခါခါ ညမအိပ်ပဲနဲ့ ကိုကြည့်တာ လူကြီးလူကောင်ဆန်ဆန်နဲ့ယှဉ်ပြိုင်တက်တဲ့သူ့ ကို သဘောကျတယ် တစ်ချို့ ကစားမသားတွေ စိတ်တိုပြီး ဘတ်တန်တွေ ရိုက်ချိုးတက်ကြပေမယ့်သူကတော့ မျက်နှာလေးမဲ့ ပြီး ခေါင်းခါရုံလောက်လေး လေးစားတယ် ဆွစ် တင်းနစ်သမားတွေက အဲ့လိုပုံစံလေးတွေများတယ် 98/99 လောက်တုန်းက အမျိုးသမီးတစ်နစ်လောကကို လွှမ်းထားတဲ့ မာတီနာဟင်ဂစ်ဆိုတာလေးလည်း အဲ့လိုပဲ အမြဲပြုံးနေတက်တာ ကျနော်တော့သိပ်ချစ် ။ရင့်ကျက်အောင် ကြိုးစားကြည့်အုံးမယ်
ကျနော်တို့ လိုလားသည်ဖြစ်စေ၊ မလိုလားသည်ဖြစ်စေ လောကကြီးမှာ မကြာခဏဆိုသလို အနိုင်အရှုံး ဆိုတာကို ကြုံကြရတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမျိုးမှာ အခု တန်ခူးပြောတဲ့ သိပ်လှတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုး အင်မတန်လိုအပ်ပါတယ်ဗျာ။
ပုထုစဉ်တွေမို့ ရင်ထဲမှာ အချစ်တွေ အမုန်းတွေ ကိုယ်စီရှိနေနိုင်ပေမယ့် ရန်လိုစိတ်ကင်းတဲ့ စကားလုံးချိုချိုတွေ ခင်းလိုက်တဲ့အခါ တဦးကိုတဦး ခါးသီးစေတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေက ရှောင်နိုင်ကြမယ်လို့ ယုံကြည်မိကြောင်းပါ။
ကိုဝေလင်းပြောသလိုပဲ..အတွင်းအဇ္ဖတ တွေကတော့..သူ့သဘာဝ အတိုင်း..အရောင်ပြောင်းနေမှာပါပဲ။ အနိုင်အရှူံး- အနိမ့်အမြင့်- ဟိုဖက်ဒီဖက် ဆိုတဲ့ မတူညီမူတွေ ကို၊ သိက္ခာရှိရှိ၊ လေးလေးစားစား ဖော်ပြ ဖြေရှင်းနိုင် ဖို့က..အရေးကြီးဆုံးပါပဲ။ အိုဘားမားပြောသွားတဲ့ စကားတခွန်းကို သဘောကျပါတယ်။ အတိအကျ တော့မဟုတ်-
I listern more carefully especially when we disagree.
!= သင်္ကေတလေး သုံးထားတာ သဘောကျတယ် ။
အိုဘားမား နဲ့ မက်ကိန်း ၊ Federer နဲ့Nadal ပြောနေတာတွေဟာ တကယ်ကျတော့ စိတ်ထဲက ဘယ်လောက်အထိ အမှန်တကယ် ခံစားရလဲဆိုတာ သူတို့ ကိုယ်တိုင်ပဲ သိလိမ့်မယ် ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တချို့ လူတွေဟာ စကားလုံးတွေကို စိတ်ထဲက တကယ်မပါဘဲ ပြောနိုင်တတ်ကြတယ် ။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်တိုင် လက်တွေ့ရော လုပ်နေရဲ့လားလို့ သေချာ ဆန်းစစ်ခြင်းမရှိဘဲ ပြောနိုင်တတ်ကြတယ် ။
တကယ်က ပြိုင်ဘက်ဆိုတာ ရန်သူလိုဖြစ်တဲ့အထိတော့ သဘောထားကြမယ့်သူ နည်းမယ်ထင်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ပြိုင်ဘက်အပေါ် သဘောထားကြီးပြီး အမြဲ အကောင်းဘက်ကပဲ မြင်နေနိုင်မယ့်သူ ရှားတယ်လို့ ဆိုရမယ် ။
ညီမအမြင် အကောင်းဆုံးကတော့ ကိုယ့်ပြိုင်ဘက်ဟာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတာပဲ ။
diplomacy အနေနဲ့ပဲ ပြောပြော ပြိုင်ဘက်အချင်းချင်း ဒီလောက်ပြောထွက်ဖို့ သဘောထားကြီးကြောင်းပြဖို့ဆိုတာလည်း မလွယ်ပါဘူးလေ။ အပေါ်ယံမဟုတ်ပဲ အစစ်အမှန် ဖြစ်ရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့နော်။
ကိုယ်တိုင် အတွင်းစိတ်က တကယ် သဘောထားကြီး အေးချမ်းနိုင်အောင် ကိုယ့်မီးတွေကိုလည်း ငြိမ်းဖို့လိုတယ်။
ပြိုင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာ ရှုံးခဲ့ရင်လည်း သဘောထားကြီးကြီး ထားနိုင်ဖို့လိုတယ်..
ပြိုင်သူလည်း မဖြစ်လို ရန်သူလည်း မဖြစ်လိုပါဘူး...
သိပ်လှတဲ့ အရေး နဲ့ အတွေးပါပဲ မတန်ခူးရေ။ Cheers!
မဲရေတွက်လို့ မပြီးသေးဘဲ အနိုင်ရသူရဲ့ သတ်မှတ် မဲအရေအတွက် 270 ကို ကျော်သွားတာနဲ့ မက်ကိန်းက အိုဘားမားကို Congratulations လုပ်ပြီး နှုတ်ဆက်တာကို ကြည့်ပြီး ရင်ထဲမှာ တလှပ်လှပ် ဖြစ်နေတာ၊ ခုတွေးရင် ခုဖြစ်တုန်း။
ပြိုင်တုန်းကတော့ သူနိုင် ကိုယ်နိုင် ချကြတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ရှုံးပြီဆိုတဲ့အခါ အရှုံးကို လက်ခံပြီး နိုင်သူကို မုဒိတာ ပွားနိုင်တယ်။ နိုင်ငံကောင်းဖို့ လက်တွဲလုပ်မယ် တဲ့။ ချိုသင်းတို့ ရွှေပြည်ကြီးမှာ အဲဒီလို ကြားရဖို့ အနှစ် ၂၀ ကျော်ပြီ။ ခုထိ မျှော်ရတုန်း..
အမေရိကန်တွေ New Year Eve လို ပျော်နေကြတာ ကြည့်ပြီး သူတို့လို ပျော်ချင်လိုက်တာလေ..
နှိုင်းယှဉ်ပြီး ရေးသွားတာလေး လှတယ်ဗျာ။ ခေါင်းစဉ်လေးလည်းလှတယ်။
(ရန်သူမဟုတ်သော) ပြိုင်ဘက်ဆိုတာ တကယ်တော့ ဘဝမှာလိုအပ်ပါတယ်၊ အဲဒါမှလည်း တိုးတက်မူ့ တွေရှိလာမှာပေါ့၊
မတန်ခူးရေ.. လာလည်ရတာတောင် နောက်ကျနေပြီ။ အိုဘားမားတို့ မက်ကိန်းတို့ကတော့ ဟုတ်တာပေါ့ အမရယ်.. နောက်ပြီး နိုင်ငံတော်တော်များများက လူတွေ အားလုံးကလည်း သူတို့ကိုပဲ အာရုံစိုက်နေတာဆိုတော့လေ..
တကယ်တော့ လူမသိ သူမသိပဲ ပြိုင်နေရတဲ့ ကိစ္စတွေက ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အများကြီးပါ အမရယ်.. ကျောင်းတက်တုန်းက လည်း ကျောင်းတက်လို့.. အလုပ်ထဲရောက်တော့လည်း အလုပ်ထဲမှာမို့.. နေရာတခုရဖို့ အတွက် ပြိုင်ကြရတယ်.. အဲဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ပြိုင်ဘက်ဟာ ရန်သူလို့ ပြောမရပေမယ့် ဆက်ဆံရေးတွေ ပြောင်းသွားကြတယ် အမ။ အရင်က အရမ်းချစ်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေလည်း မချစ်နိုင်တော့ဘူး.. အခင်အမင်တွေ ပျက်ပြီး စိတ်ရင်းတွေက အဲဒီမှာ ပေါ်လာတာပဲ... တကယ်တော့ အရှုံးအတွက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အနိုင်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ထားတတ်ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ.. အမရယ်..
ပြိုင်ဘက်က ရန်သူ မဟုတ်ပေမယ့်....
အာဏာနဲ့ လက်နက်အားကိုး အခြေခံသူကတော့
ညက Man U ရှုံးသွားလို့စိတ်ထဲမှာ ခပ်ညစ်ညစ်ဖြစ်နေရာက တန်ခူးရေးထားတာ နောက်တစ်ခေါက် လာဖတ်ပြီး ပြိုင်ဖက် အကြောင်းကို စဉ်းစားနေတယ်...။
တကယ်ဆို ကိုယ်လဲ လုံးလုံးမှ မရင့်ကျက်သေး၊ သဘောထားလဲ မကြီးတတ်သေးဘူးကော...။
ငါတော်တော်လိုသေးပါလား... လို့ ...
အမှန်တော့ ပြိုင်တယ်ဆိုတာထက် ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ အကောင်းဆုံး ဌာန်ကုန် လုပ်ဖို့ပါပဲ နော်။ ဒါဆိုရင် အနိုင်အရှုံးနဲ့ ပတ်သက်လို့ စိတ်ထားနိုင်သွားမယ်ထင်တာပဲ။
မတန်ခူးရယ့် စာတွေကို လာဖတ်ပါတယ် စီဘောက်
မရှိလို့ ဒီနေရာက နုတ်ဆက်ပါတယ်။ မဂ်လာပါ မတန်ခူး
လင့်ခ်ကို ကျနော့်ဆီမှာ တင်ထားပါတယ် အားပေး
When Obama won, the only thing I learned is that I have to stop spending heavily, because his victory implies that the recession in US is real (or at least Media had achieved in making people believed that recession is there already). Time to save more just in case....
ခုလိုအားပေးတာ ကျေးဇူုးပါညီမရေ… နောင်လဲလာလည်ပါဦးနော်…
မြတ်နိုးရေ… ကျစ်လစ်တဲ့ ကိုဝေလင်းရဲ့ ကော်မန့် ထဲကလိုပေါ့ ညီမရယ်… အနည်းလေး ခါးသီးတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေ ရှောင်နိုင်ကြတာပေါ့နော်…
ကျေးဇူးပါ sin dan larရေ… sin dan lar ရဲ့ ဘလော့ဂ်လိပ်စာလေးလဲ ပြောပါဦးနော်… အမရှာမတွေ့ လို့ ပါ…နောင်လဲ လာလည်ပါဦးနော်…
ကိုပေါရေ…ဟုတ်ပါတယ်… ရင့်ကျက်သော လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ထူထောင်နိုင်ရင် နားလည်မှုတွေ တည်ဆောက်နိုင်ကြမှာ အမှန်ပါပဲ…
မ ရေ… ကျေးဇူးပါ… ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်လေးက စပြီးကောင်းအောင်လုပ်ရင်… တဖြေးဖြေးနဲ့ကမ္ဘာကြီးတခုလုံး ကောင်းလာနိုင်တာပေါ့ မ ရယ်…
Anonymousရေ… ခုလိုလာလည်ပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မှတ်ချက်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ… Positive Thinking က Negative Thinking ထက်စာရင် ပ်ိုကောင်းတာပေါ့နော်… ဘလေ့ာဂ်ယဉ်ကျေးမှုအရ တယောက်နဲ့ တယောက် ဖေးကူ အားပေးကြ အမြင်တွေ ဖလှယ်ကြ တာပါ… ဘုတ် ကို ကျီး မြှောက် ကျီး ကို ဘုတ် မြှောက် ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ ကျွန်မရဲ့ ခုဒီပို့ စ်က ကော်မန့် တွေ အကုန်ဖတ်ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်… ရေးသူ အလိုကျ မြှောက်ပင့် ပြောဆိုတာ မဟုတ်ပဲ ကိုယ့်အမြင်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆွေးနွေးကြတာပါ… ကိုယ့်အမြင်ကိုယ် လွတ်လပ်စွာတင်ပြတဲ့ Anonymousကို ကျွန်မက စိတ်မဆိုးပါဘူး… ဒါဘလော့ဂ်ရဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ အလှပါ…
မောင်မျိုးရေ… မောင်မျိုးကော်မန့် လေး ပြန်နေချိန်မှာ မောင်မျိုးကတော့ အိုးပုတ်ပန်းလေးတွေရယ် အေးကြည်မရယ်နဲ့ ပျော်နေလောက်ပြီ… ဖက်ဒါရာ ပရိသတ်ချင်းတူတာ သိရလို့ ဝမ်းသာပါတယ်… မောင်မျိုး အစစ အဆင်ပြေပါစေ…
ကိုဝေလင်းရဲ့ ကော်မန့် က ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နဲ့ အတော်ပြည့်စုံပါတယ်… ကျေးဇူးပါ…
ကေရေ… သိက္ခာရှိရှိ၊ လေးလေးစားစား… ဟုတ်တယ်.. အဲဒါသိပ်အရေးကြီးပါတယ်… ကေထောက်ပြသွားတဲ့ အိုဘားမားစကားလေးက ကောင်းလိုက်တာ….
ဂျစ်ရေ… ကိုယ်နဲ့ ကိုယ်သာ ယှဉ်ပြိုင်တာတော့ အကောင်းဆုံးပေ့ါ ညီမရေ…
ပန်ရေ… ဟုတ်ပါတယ်… ပြောနိုင်တဲ့ အင်အားရှိတာကိုက အတော်ချီးကျုးစရာကောင်း နေပါပြီ…
ပေါက်ရေ… ဘုတ်ကိုကျီးမြှောက်..ကျီးကိုဘုတ်မြှောက်..ဆိုတာ.. အချင်းချင်းမြှောက်ပြော နေတာလို့အကြမ်းဖျင်းမှတ်ထားလိုက်နော်…
ဟုတ်ပါတယ် ကိုဇနိရေ… အတော်ခက်ပေမယ့် သဘောထားကြီးတာက အကောင်းဆုံးပေါ့နော်…
ချိုသင်းရေ… ကျေးဇူးပါ… ချိုသင်းတို့ က အဲဒီမှာရှိနေတော့ ပိုမြင်သာတာပေါ့နော်…
ကောင်းကင်ကိုရေ… ခုလို အားပေးတာ ကျေးဇူးပါ…
ဟုတ်ပါတယ် ရွေခိုင်ရေ… ပြိုင်ဘက်ရှိမှ ပိုတိုးတက်တာ အမှန်ပါ…
နုရေ… နုပြောသလို တို့ လဲ ကြုံဖူးတယ်… ကိုယ့်ကို ပြိုင်ဘက်လို သဘောထားနေမှန်း ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင်မသိပဲ ရန်သူလို အရှိုက်ထိုးခံလိုက်ရဘူးတယ်… ကိုယ်က ရင်ထဲမှာ ဆွေလိုမျိုးလိုခင်ခဲ့တော့ အတော်ခံစားခဲ့ရတယ် ညီမရေ….
ကိုသစ်နက်ဆူးရေ… ဟုတ်တယ်နော်… ပညာဥာဏ်က အတော်ကို အရေးကြီးပါတယ်…
သက်ဝေရေ… တန်ခူးလဲ သူတို့ ကို ကြည့်ပြီး ကိုယ်နဲ့ ယှဉ်တွေးသွားမိတာ… ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က အတော်ကို မရင့်ကျက်သေးတာအမှန်ပဲ…
မ ရေ… ဟုတ်တာပေါ့… ဟိုတနေ့ ကတောင် အိမ်က အမျိုးသားကို ပြောနေတာ… ကျွန်မတော့ အမေရိကန်သမ္မတ မလုပ်ချင်ဘူးလို့ … ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းလေးပဲ နေချင်တယ်လို့ …
ကိုအောင်ရေ… ကျေးဇူးပါနော်… ကျွန်မဆီ တခုတ်တရ လာလည်တာရယ် လင့်ခ်ပေးတာရယ် အတွက်ပါ… ကျွန်မလဲ လာလည်ပါမယ်… နောင်လဲ လာလည်ပါဦးနော်…
Anonymous ရေ… စိတ်ဝင်စားစရာပါ… ကမ္ဘာကြီးရဲ့ စီးပွားရေးကပ်ကို အိုးဘားမား ဘယ်လိုများကိုင်တွယ်မလဲဆိုတာလေ….